Spiders toy ny Pets | Saripika sary maody maimaim-poana
Spiders toy ny Pets - Ireo tombony
Izay manapa-kevitra ny ho mpitaingin-tsoavaly toy ny biby fiompy dia tsy maintsy mahafantatra fa tsy kilalao mampihomehy izy. Azo atao eo an-tanany ny habokana indraindray, saingy ny biby dia mialokaloka any amin'ny terrarium.
Spiders ho biby
Raha tonga any amin'ny terrarium ny tanana, dia miteraka adin-tsaina ho an'ny mpitsambikina izany, ary afaka manaikitra ny biby. Ny terrarium izay itehirizana ny spider dia tsy maintsy manana ny dian-tongotr'i 30 × 40 centimeters. Ny haavony dia tokony handrefesana hatramin'ny 50 centimeters. Tsy tokony hohanina ny biby rehefa moulting.
Raha tsy izany, ny sakafon'ny amboadia dia bibikely sy arachnids velona, ​​toy ny valala izay azo vidiana amin'ny toeram-pivarotana manokana. Ankoatra izany, tokony ho ampy rano foana. Ny toe-tsain'ny spiders dia tsotra. Ny biby dia tsy mila hafanana be loatra ary toy ny lakolosy boribory toy ny ambanin'ny tany.
Iza amin'ireo mpitaingina no mety tsara?
Ireo karazam-borona malaza indrindra amin'ny biby fiompy, dia ny tarantola mena madinika, ary koa ny vorona mena ary ny meksikanina mena-knee tarantula. Ny teo aloha dia dimy ka hatramin'ny enina santimetatra ary milamina sy milamina. Mihamidina tsimoramora ny tariby marevaka mena ary miato mandritra ny fotoana maharitra amin'ny sakafo. Ny sakafo mahasalon'ity trano ity dia bibikely ary bibin-tsinahy.
Ny zana-tsavony miloko fandriam-pahalemana dia vorona sy taonan'ny vorona hatramin'ny taona 15. Ny sakafo ankafizin'io karazam-borona io dia valim-borona na ravina. Ankoatra izay, ny meksikanina mena manana satroboninahitra dia malaza be toy ny biby fiompy ary mahasoa indrindra ho an'ireo mpandahateny ho toy ny spider voalohany. Izy dia nomena crickets na valala.
Inona no lanjan'ny sponjy?
Miankina amin'ny karazana sy ny habeny ary ny karazany, ny tarantula dia mandoa ny 200 Euro. Ny terrarium nilaina tamin'ny vidin'ny spider eo anelanelan'ny folo sy dimampolo euros, arakaraka ny habeny. Ho tonga any amin'ny farany ambany, 15 liter mulch bark, biby sakafo velona.
Spider dia madio sy mangina
Tsy mila toerana malalaka
Mahavariana ny mijery sponjy
Olona maro no maharikoriko amin'ny andrin-jiolahy ary manana arachnophobia tena izy. Izay rehetra manana ampinga toy ny biby fiompy, dia tsy maintsy manantena io fitsidihana io, izay miala sasatra amin'ny sponjy maharikoriko, "mandehandeha" any. Ny solontenan'ny teny hoe spider dia manely ny tsy fahampiana sy ny fisavoritahana amin'ny olona maro.
Mivezivezy mangingina ireo "mpitsikilo" volo izay mikitroka manodidina ny tany, maro no nanangana ny hackles. Noho izany antony izany dia tsy tokony hilaza amin'ny mpitsidika avy hatrany ianao fa manana hala ianareo ho biby fiompy.